ကိုယျတတျနိုငျစှမျးရှိသလောကျ လုပျဆောငျပေးပွီးတဲ့အခါ လှတျမွောကျရာလမျး ကိုရှာဖှတော အပွဈလို့ မမွငျဘူးဆိုတဲ့ ထားထကျထကျ – Shwe Likes
ကိုယျတတျနိုငျစှမျးရှိသလောကျ လုပျဆောငျပေးပွီးတဲ့အခါ လှတျမွောကျရာလမျး ကိုရှာဖှတော အပွဈလို့ မမွငျဘူးဆိုတဲ့ ထားထကျထကျ
လကျရှိ လူမှုကှ နျယကျစာမကျြနှာ မှာရပေ နျးစားနတောက နှဦေးတျောလှ နျရေးမှာ ပထမဦးဆုံးေ တာခိုခဲ့တဲ့ မိတျကပျမေ ဦးနဲ့ မျောဒယျလျဟနျ လငျးတို့ စုံတှဲဟာ နိုငျငံရပျခွားကို ပွောငျးရှတေိ့မျးရှောငျ သှားခဲ့ပွီဆိုတဲ့ သတငျးပဲဖွ ဈပါတယျ။
ထိုသတငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိသတျေ တှက ဝဖေနျမှုတှရှေိေ နကွတာမို့ မဦေးတို့လိုပဲေ ခိုနတေဲ့ မျောဒယျလျ၊ သရုပျဆောငျ ထားထကျထကျက သူမရဲ့အမွငျကို အခုလိုပဲပွော လာပါတယျ။
“စဈပှဲက ကိုယျ့ဆီေ ရာကျ လာတဲ့အခါ လကျနကျ ကိုငျပွီးလဲ မတိုကျနိုငျ ၊ တိုကျနိုငျလဲ လုံလောကျတဲ့ ထောကျပို့ပ စ်စညျးအငျအား ကမရှိ၊ အဲ့ဒီတော့ လူတှဟော သူတတျနိုငျ စှမျးရှိသေ လာကျ လုပျဆောငျေ ပးပွီးတဲ့အခါ လှတျမွောကျရာလမျးကိုရှာဖှတော အပွဈဖွဈ တယျလို့ ကြှနျမမထငျပါဘူး။
လှတျမွောကျသှား တဲ့သူတှေ အဖမျးခံရမှ .. -တျဖွတျခံရမှ မှ ဝမျးနညျး ပါတယျ RIP ပါဆိုပွီး တရကျလောကျ ပို့ဈတငျကွမှာ လား? ပွနျလမျး မရှိတဲ့နရောကိုေ ရာကျမှ ကနြေပျကွ မှာလားရှငျ။ ဘယျကိစ်စမဆို အပွဈတငျလိုကျဖို့ထကျ ငါတို့ဘကျတျောသား တယောကျ လှတျမွောကျပွီ။ သူ ဆကျပွီး တိုကျပှဲဝငျနဦေးမယျ ဆိုပွီး ဝမျးသာပေးလို့ မရနိုငျဘူးလားရှငျ။
တခြို့တှနေနွေေ ကသလို မသိသလိုလို ရောယော ငျပွီး နလေို့ရေ နလကျြနဲ့ ကိုယျနိုငျရာကိုလုပျေ ဆာငျပေးနကွေရငျ အသိအမှတျပွုပေးရမယျ မဟုတျလားရှငျ။ ဒုက်ခရောကျတဲ့အခြိနျ ဘေးလှတျရာပွေွး ကရတဲ့အခါ လူကထှကျ သှားပမေယျ့ ကိုယျတတျတဲ့ ပညာနဲ့ဖွဈစေ နိုငျရာနရောကဖွဈစေ ပါဝငျနနေိုငျဖို့ တတျနိုငျသေ လာကျ ဆှဲချေါထားရမှာ မဟုတျလား။ ”
“သိပျပငျပနျး ဒုက်ခရော ကျတဲ့အခါ ရှေးစရာလမျးမ ရှိတော့လို့ ရှိတဲ့လမျးကွောငျး ရှေးခယျြပွီးသှားရသူတှကေို တျောလှနျရေး အတှကျ နိုငျရာအပို ငျးကနေ ပါဝငျစဖေို့ အားပေးသ ငျ့တယျ မဟုတျလား။ အားလြော့ ဝမျးနညျးစပွေီး ပိုပငျပနျးစတေဲ့အခါ ထိရောကျစှာ လုပျေ ဆာငျနိုငျတဲ့ လူတှေ နညျးပါး သညျထကျ နညျးပါး သှားမှာကိုလဲ စိတျပူမိပါတယျ။
တောတှငျးနထေိုငျမှုဟာ သီတငျးကြှတျ တနျေ ဆာငျတိုငျ နှဈသဈကူး ညဘကျ မီးရှူးမီးပနျးဖောကျတဲ့ အသံကွားရငျတောငျ လကျနကျကွီးပ ဈတယျထငျပွီး မှောငျမဲထဲ ဘယျပွေး ရမှနျးမသိ လနျ့လနျ့နိုးနရေတဲ့ ညပေါငျးမြားစှာ၊ တောထဲတောငျထဲ ဘယျလိုနထေိုငျရတယျ၊ ဘယျလောကျစိ တျပငျပနျးဝမျးန ညျးစရာတှနေဲ့ ဘယျလိုကြျောဖွ တျနရေလဲဆို တာကို မွို့ပျေါက တခြို့တှေ သိနိုငျဖို့ ခဲယဉျး ပါတယျရှငျ။
ကိုယျခငျြး မစာနိုငျရ ငျတောငျ အပွဈတှမေဖို့ သငျ့ဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ လကျနကျကိုငျမတို ကျနိုငျတဲ့သူတှကေ သူနိုငျရာနရော ကနေ တာဝနျနိုငျ သလောကျ ထမျးေ နကွတာပါပဲ။ ဘယျေ နရာကမဆို ပါဝငျသူတယောကျစီတိုငျးဟာ လေးစားစရာကော ငျးသူခညျြးပါပဲ။
အခုခြိနျ မွို့ပျေါကို USA က လယောဉျတဈစီးလောကျလှတျလိုကျပွီး ဘာမှယူစရာမလို လိုကျခငျြတဲ့သူတကျခဲ့လို့ပွောရငျ လယောဉျကို အာဖဂနျ ကလူတှလေို တှယျတကျပွီး သှားကွမယျ့ သူတှေ အမြားကွီးရှိမှာပါပဲ။ မွို့ပွမှာ နထေိုငျသူတှလေဲ အစစ အရာ ရာ လုံခွုံမှုရှိနေ တာမှမဟုတျတာ ကြှနျမတို့ နားလညျပါတယျ။ အပွဈတငျစောဖို့ထကျ ကိုယျလုပျနိုငျ တဲ့အတိုငျးအတာ အတိုငျးဆကျလု ပျနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အခငျြးခငျြးဖေးမရငျး အားပေးကွဖို့ပဲလိုတယျ ထငျပါတယျ။ ”
“ဆိုရှယျ မီဒီ ယာမှာ လူသိနသေူေ တှအတှကျ ရှောငျရ ၊ ပုနျးရတဲ့အခါ သူမြားတှထေကျ ပိုခကျခဲပါတယျ။ ကိုယျ့မကျြနှာ ကွီးမှတျမိပွီး ဘယျခြိနျ အဖမျးခံရမလဲ? ဘယျလိုရှောငျရမလဲ? ဘယျလိုနထေိုငျရမလဲ ဆိုပွီး အမွဲတမျးလုံခွုံရေးဦးစားပေးစဉျးစား ရပါတယျ။ တခြို့ခရီး လမျးတှေ နာရီပိုငျးအတှငျးေ ရာကျနိုငျတဲ့လမျွးေ ကာငျးေ တှကို လုံခွုံရေးအရ ၁ ညအိပျ ၂ ညအိပျ၊ တခါတေ လ ရကျရှညျကွာ ခကျခကျခဲခဲ ပငျပငျပနျးပနျး သှားရတဲ့ အခါတှလေဲ ရှိပါတယျ။
ဒါတှကေို အသေးစိတျ နားမလညျနိုငျရ ငျတောငျ ၊ ကိုယျခငျြးမ စာနိုငျရငျတောငျ အပွဈမဖို့ကွဖို့ ၊ မလှောငျပွောငျကွဖို့၊ အလှဲအခြျောေ တှရှိခဲ့ရငျတောငျ အခငျြးခြ ငျးဖေးမပွီး လမျးကွောငျးတညျ့အောငျ အပွုသဘောနဲ့ ထိနျးကြောငျးပေးကွဖို့ မတ်ေတာရပျခံပါတယျရှငျ။ ကြှနျမတို့ လူမြိုးဟာ အခါကွီးရကျကွီး မြားမှာ ဇီဝိတ ဒါန အနနေဲ့ ငှကျကလေးတှေ ငါးကလေးတှကေ စလို့ သတ်တဝါလေးေ တှ ရဲ့အသကျကို ကယျတငျကုသို လျယူကွတဲ့ မတ်ေတာဓါတျအငျမတနျကွီးတဲ့လူမြိုးပါ။
အခုလို အသကျေ ဘးကွောငျ့ မိမိတို့နေ ထိုငျရာ အမိမွေ ကို စှနျ့ .. မိသားစုကိုစှနျ့ .. ပိုငျဆိုငျသမြှကို စှနျ့ပွီး ခွဗေလာ လကျဗလာ နဲ့ ရှောငျတိ မျးရတဲ့ ကြှနျမတို့ရဲ့ ရဲဘျောရဲဘကျဟော ငျးအခြို့အပျေါ မတ်ေတာပွ ပေးကွပါလို့ တောငျးပနျလိုပါတယျ။ ဘယျသူတှေ ဘယျလိုပဲ ပွဈတငျကွိမျးမောငျးကွပါစေ။ အသကျဘေးကွောငျ့ အမိမွမှေရှောငျတိမျးခဲ့ကွရတဲ့ ရဲဘျောမြားကို အသကျရှငျသ၍ စဈအာဏာ ရှငျစနဈ ကဆြုံးရေး တိုကျပှဲဝငျမယျ့ ရဲဘျောမြား လို့ ကြှနျမက ယုံကွညျလေးစားခဈြခငျလကျြပါရှငျ့” ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ Source: Htar Htet Htet’s fb
လက်ရှိ လူမှုကွ န်ယက်စာမျက်နှာ မှာရေပ န်းစားနေတာက နွေဦးတော်လှ န်ရေးမှာ ပထမဦးဆုံးေ တာခိုခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ်မေ ဦးနဲ့ မော်ဒယ်လ်ဟန် လင်းတို့ စုံတွဲဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပြောင်းရွှေ့တိမ်းရှောင် သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ သတင်းပဲဖြ စ်ပါတယ်။
ထိုသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ေ တွက ဝေဖန်မှုတွေရှိေ နကြတာမို့ မေဦးတို့လိုပဲေ ခိုနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင် ထားထက်ထက်က သူမရဲ့အမြင်ကို အခုလိုပဲပြော လာပါတယ်။
“စစ်ပွဲက ကိုယ့်ဆီေ ရာက် လာတဲ့အခါ လက်နက် ကိုင်ပြီးလဲ မတိုက်နိုင် ၊ တိုက်နိုင်လဲ လုံလောက်တဲ့ ထောက်ပို့ပ စ္စည်းအင်အား ကမရှိ၊ အဲ့ဒီတော့ လူတွေဟာ သူတတ်နိုင် စွမ်းရှိသေ လာက် လုပ်ဆောင်ေ ပးပြီးတဲ့အခါ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုရှာဖွေတာ အပြစ်ဖြစ် တယ်လို့ ကျွန်မမထင်ပါဘူး။
လွတ်မြောက်သွား တဲ့သူတွေ အဖမ်းခံရမှ .. -တ်ဖြတ်ခံရမှ မှ ဝမ်းနည်း ပါတယ် RIP ပါဆိုပြီး တရက်လောက် ပို့စ်တင်ကြမှာ လား? ပြန်လမ်း မရှိတဲ့နေရာကိုေ ရာက်မှ ကျေနပ်ကြ မှာလားရှင်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို အပြစ်တင်လိုက်ဖို့ထက် ငါတို့ဘက်တော်သား တယောက် လွတ်မြောက်ပြီ။ သူ ဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေဦးမယ် ဆိုပြီး ဝမ်းသာပေးလို့ မရနိုင်ဘူးလားရှင်။
တချို့တွေနေနြေ ကသလို မသိသလိုလို ရောယော င်ပြီး နေလို့ရေ နလျက်နဲ့ ကိုယ်နိုင်ရာကိုလုပ်ေ ဆာင်ပေးနေကြရင် အသိအမှတ်ပြုပေးရမယ် မဟုတ်လားရှင်။ ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန် ဘေးလွတ်ရာပြေြး ကရတဲ့အခါ လူကထွက် သွားပေမယ့် ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ဖြစ်စေ နိုင်ရာနေရာကဖြစ်စေ ပါဝင်နေနိုင်ဖို့ တတ်နိုင်သေ လာက် ဆွဲခေါ်ထားရမှာ မဟုတ်လား။ ”
“သိပ်ပင်ပန်း ဒုက္ခရော က်တဲ့အခါ ရွေးစရာလမ်းမ ရှိတော့လို့ ရှိတဲ့လမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ပြီးသွားရသူတွေကို တော်လှန်ရေး အတွက် နိုင်ရာအပို င်းကနေ ပါဝင်စေဖို့ အားပေးသ င့်တယ် မဟုတ်လား။ အားလျော့ ဝမ်းနည်းစေပြီး ပိုပင်ပန်းစေတဲ့အခါ ထိရောက်စွာ လုပ်ေ ဆာင်နိုင်တဲ့ လူတွေ နည်းပါး သည်ထက် နည်းပါး သွားမှာကိုလဲ စိတ်ပူမိပါတယ်။
တောတွင်းနေထိုင်မှုဟာ သီတင်းကျွတ် တန်ေ ဆာင်တိုင် နှစ်သစ်ကူး ညဘက် မီးရှူးမီးပန်းဖောက်တဲ့ အသံကြားရင်တောင် လက်နက်ကြီးပ စ်တယ်ထင်ပြီး မှောင်မဲထဲ ဘယ်ပြေး ရမှန်းမသိ လန့်လန့်နိုးနေရတဲ့ ညပေါင်းများစွာ၊ တောထဲတောင်ထဲ ဘယ်လိုနေထိုင်ရတယ်၊ ဘယ်လောက်စိ တ်ပင်ပန်းဝမ်းန ည်းစရာတွေနဲ့ ဘယ်လိုကျော်ဖြ တ်နေရလဲဆို တာကို မြို့ပေါ်က တချို့တွေ သိနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်း ပါတယ်ရှင်။
ကိုယ်ချင်း မစာနိုင်ရ င်တောင် အပြစ်တွေမဖို့ သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်မတို က်နိုင်တဲ့သူတွေက သူနိုင်ရာနေရာ ကနေ တာဝန်နိုင် သလောက် ထမ်းေ နကြတာပါပဲ။ ဘယ်ေ နရာကမဆို ပါဝင်သူတယောက်စီတိုင်းဟာ လေးစားစရာကော င်းသူချည်းပါပဲ။
အခုချိန် မြို့ပေါ်ကို USA က လေယာဉ်တစ်စီးလောက်လွှတ်လိုက်ပြီး ဘာမှယူစရာမလို လိုက်ချင်တဲ့သူတက်ခဲ့လို့ပြောရင် လေယာဉ်ကို အာဖဂန် ကလူတွေလို တွယ်တက်ပြီး သွားကြမယ့် သူတွေ အများကြီးရှိမှာပါပဲ။ မြို့ပြမှာ နေထိုင်သူတွေလဲ အစစ အရာ ရာ လုံခြုံမှုရှိနေ တာမှမဟုတ်တာ ကျွန်မတို့ နားလည်ပါတယ်။ အပြစ်တင်စောဖို့ထက် ကိုယ်လုပ်နိုင် တဲ့အတိုင်းအတာ အတိုင်းဆက်လု ပ်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အချင်းချင်းဖေးမရင်း အားပေးကြဖို့ပဲလိုတယ် ထင်ပါတယ်။ ”
“ဆိုရှယ် မီဒီ ယာမှာ လူသိနေသူေ တွအတွက် ရှောင်ရ ၊ ပုန်းရတဲ့အခါ သူများတွေထက် ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ့်မျက်နှာ ကြီးမှတ်မိပြီး ဘယ်ချိန် အဖမ်းခံရမလဲ? ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ? ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ ဆိုပြီး အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးဦးစားပေးစဉ်းစား ရပါတယ်။ တချို့ခရီး လမ်းတွေ နာရီပိုင်းအတွင်းေ ရာက်နိုင်တဲ့လမ်ြးေ ကာင်းေ တွကို လုံခြုံရေးအရ ၁ ညအိပ် ၂ ညအိပ်၊ တခါတေ လ ရက်ရှည်ကြာ ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း သွားရတဲ့ အခါတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဒါတွေကို အသေးစိတ် နားမလည်နိုင်ရ င်တောင် ၊ ကိုယ်ချင်းမ စာနိုင်ရင်တောင် အပြစ်မဖို့ကြဖို့ ၊ မလှောင်ပြောင်ကြဖို့၊ အလွဲအချော်ေ တွရှိခဲ့ရင်တောင် အချင်းချ င်းဖေးမပြီး လမ်းကြောင်းတည့်အောင် အပြုသဘောနဲ့ ထိန်းကျောင်းပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မတို့ လူမျိုးဟာ အခါကြီးရက်ကြီး များမှာ ဇီဝိတ ဒါန အနေနဲ့ ငှက်ကလေးတွေ ငါးကလေးတွေက စလို့ သတ္တဝါလေးေ တွ ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ကုသို လ်ယူကြတဲ့ မေတ္တာဓါတ်အင်မတန်ကြီးတဲ့လူမျိုးပါ။
အခုလို အသက်ေ ဘးကြောင့် မိမိတို့နေ ထိုင်ရာ အမိမြေ ကို စွန့် .. မိသားစုကိုစွန့် .. ပိုင်ဆိုင်သမျှကို စွန့်ပြီး ခြေဗလာ လက်ဗလာ နဲ့ ရှောင်တိ မ်းရတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ဟော င်းအချို့အပေါ် မေတ္တာပြ ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်လိုပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းကြပါစေ။ အသက်ဘေးကြောင့် အမိမြေမှရှောင်တိမ်းခဲ့ကြရတဲ့ ရဲဘော်များကို အသက်ရှင်သ၍ စစ်အာဏာ ရှင်စနစ် ကျဆုံးရေး တိုက်ပွဲဝင်မယ့် ရဲဘော်များ လို့ ကျွန်မက ယုံကြည်လေးစားချစ်ခင်လျက်ပါရှင့်” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Htar Htet Htet’s fb
ခဈြသူလေး ဆှိဝတျရညျသောငျး အရမျးသတိရနတေဲ့ အရာလေးတဈခုကို အမှတျတရလေး ဖနျတီးပေးပီး အပီအပွငျ ရိုလိုကျတဲ့ အဆိုတျော ကြားပေါကျ